ဆိုးလျမွို့က ကြောငျးတှမှော မွနျမာ့နှဦေးတျောလှနျရေးအကွောငျး သငျပေးတော့မယျ့ တောငျကိုရီးယား – Youth Bar
အခု တောငျကိုရီးယား ဆိုးလျမွို့ ကကြောငျးတှေ မှာ မွနျမာ့နှဦေးတျောလှနျရေးအကွောငျး သငျပေးတော့မယျတဲ့။ မူလတနျး၊ အလယျတနျးနဲ့အထကျ တနျးကြောငျး သားတှအေတှကျ
မွနျမာစ.ဈတ.ပျရဲ့အ.ာဏ.ာသိ.မျးမှုနဲ့ ဒီမိုကရစေီအတှကျကွိုးပမျးကွတဲ့ မွနျမာပွညျသူတှရေဲ့အကွောငျးကို ဆှေးနှေးမယျ့အခှငျ့အလမျးပညာရေးပါ။ အခု အခှငျ့ အလမျးပညာရေးကို ပုံမှနျသငျရိုးညှနျးတမျးတှမှော
မဖျောပွထားပမေယျ့လညျး လူမှုရေးပွဿနာတှကေိုသငျကွားပေးမယျ့ လှုပျရှားမှုမြိုးပါ။ မွနျမာနိုငျငံအကွောငျး သငျကွား ပေး မယျ့ခေါငျးစဉျ ၅ခုရှိမှာပါ- ၁.မွနျမာ နှငျ့ ကြှနျုပျ၏ ဆကျသှယျမှု၊ ၂.မွနျမာနိုငျငံရဲ့ ရဲရငျ့သောနိုငျငံသားမြား
၃.နစေ့ဉျဘဝမှာ ငွိမျးခမျြးရေးကိုထိနျးသိမျးခွငျး၊ ၄. မွနျမာနိုငျငံမှငွိမျးခမျြးရေး၊ ၅. မွနျမာ-ကိုရီးယား သှေးစညျးညီညှတျမှုဖလှယျခွငျးဆိုတဲ့ အကွောငျးအရာတှေ ပါ ဝငျမှာပါ။ တောငျကိုရီးယားကြောငျးသားတှကေို
မွနျမာ့နှဦေးတျောလှနျရေးအကွောငျး သငျကွားပေးရတဲ့ ရညျရှယျခကျြက အခု အခှငျ့အလမျးပညာရေးကတဆငျ့ ကြောငျးသားလေးတှေ ရငျ့ကကျြတဲ့နိုငျငံသားတှေ ဖွဈ လာစဖေို့ပါ။ ဒါ့အပွငျ ကြှနျုပျတို့ အိမျနီးခငျြးနိုငျငံတှရေဲ့ငွိမျးခမျြးရေးကို ထိနျးသိမျးခွငျးက ကြှနျုပျတို့ရဲ့ငွိမျးခမျြးရေးကို ကာကှယျစောငျ့ရှောကျခွငျးဆိုတဲ့ အသိပ ညာကိုရရှိစခေငျြလို့ပါတဲ့။ ကြေးဇူးပါ ယောက်ခမမွရေေ။
မူရငျးပို့ဈပိုငျရှငျအား လေးစားစှာဖွငျ့ ခရကျဒဈပေးပါတယျ။
အခု တောင်ကိုရီးယား ဆိုးလ်မြို့ ကကျောင်းတွေ မှာ မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေးအကြောင်း သင်ပေးတော့မယ်တဲ့။ မူလတန်း၊ အလယ်တန်းနဲ့အထက် တန်းကျောင်း သားတွေအတွက်
မြန်မာစ.စ်တ.ပ်ရဲ့အ.ာဏ.ာသိ.မ်းမှုနဲ့ ဒီမိုကရေစီအတွက်ကြိုးပမ်းကြတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အကြောင်းကို ဆွေးနွေးမယ့်အခွင့်အလမ်းပညာရေးပါ။ အခု အခွင့် အလမ်းပညာရေးကို ပုံမှန်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေမှာ
မဖော်ပြထားပေမယ့်လည်း လူမှုရေးပြဿနာတွေကိုသင်ကြားပေးမယ့် လှုပ်ရှားမှုမျိုးပါ။ မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်း သင်ကြား ပေး မယ့်ခေါင်းစဉ် ၅ခုရှိမှာပါ- ၁.မြန်မာ နှင့် ကျွန်ုပ်၏ ဆက်သွယ်မှု၊ ၂.မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရဲရင့်သောနိုင်ငံသားများ
၃.နေ့စဉ်ဘဝမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ၄. မြန်မာနိုင်ငံမှငြိမ်းချမ်းရေး၊ ၅. မြန်မာ-ကိုရီးယား သွေးစည်းညီညွတ်မှုဖလှယ်ခြင်းဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ပါ ဝင်မှာပါ။ တောင်ကိုရီးယားကျောင်းသားတွေကို
မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေးအကြောင်း သင်ကြားပေးရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က အခု အခွင့်အလမ်းပညာရေးကတဆင့် ကျောင်းသားလေးတွေ ရင့်ကျက်တဲ့နိုင်ငံသားတွေ ဖြစ် လာစေဖို့ပါ။ ဒါ့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကို ထိန်းသိမ်းခြင်းက ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုတဲ့ အသိပ ညာကိုရရှိစေချင်လို့ပါတဲ့။ ကျေးဇူးပါ ယောက္ခမမြေရေ။
မူရင်းပို့စ်ပိုင်ရှင်အား လေးစားစွာဖြင့် ခရက်ဒစ်ပေးပါတယ်။
မတျတပျတောငျမရပျနိုငျဘဲ ကနျြးမားရေး အရမျးဆိုးဝါးနတေဲ့ အခွအေနကေိုပွောပွလာတဲ့ ပိုငျတံခှနျအမရဲ့ အသံဖိုငျ